IYunivesithi Yase-Chicago State: I-GPA, izikolo ze-SAT & ACT ACT
I-University State ye-Chicago GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
I-Yunivesithi yase-Chicago State i-GPA, izikolo ze-SAT kunye ne-ACT. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ulinganisa njani kwiYunivesithi yaseYictoria State?
Ingxoxo yeMigangatho ye-Admissions yeYunivesithi yase-Chicago State:
IYunivesithi yase-Chicago State, isikhungo sikawonkewonke esisezantsi kweChicago, sinomlinganiselo owamkelekileyo owamkelekileyo - kuphela i-21% ngo-2015. Le nto yathi i-yuyunivesithi ayikhethi ngokukhethekileyo. Esikhundleni salo, izinga lokuvuma eliphantsi liyiphumo lesiphakamiso sabantu abafake isicelo esikhulu, kunye nepesenti enkulu yabenzi bezicelo abangahlangabezananga neemfuno ezingundoqo zokumkelwa okanye abazisebenzisayo emva kokuba izithuba zizaliswe. Igrafu engenhla ibonisa idatha yokubakholwa kwabafundi abamkelekileyo, bayamkelwa kwaye balinde uluhlu. Abaninzi abavuma ukuba abafundi badibanise izikolo ze-SAT (i-RW + M) eziyi-850 okanye ngaphezulu, ii-ACT izikolo ezidibeneyo ezili-16 okanye ngaphezulu, kunye ne-GPA yesikolo esiphakamileyo se-2.5 ("C +" / "B-"). Abafundi abambalwa bavunyelwa ngamabanga kwaye bavavanya amanqaku angaphantsi kwezi ndawo eziphantsi, kwaye bambalwa banqatshelwe ngamanani aphezulu.
I-website ye-Chicago State admissions ithi abafaki-sicelo kufuneka babe nemilinganiselo engama-16 yomsebenzi we-ACT okanye amanqaku angama-790 SAT (i-RW + M) ukuze afanelekile ukungena. Idatha yeCapepex kwigrafu, nangona kunjalo, ibonisa ukuba abafundi abaninzi bangenela amanqaku angaphantsi kwezi ncinane. Oku kunokuba luyingxenye kuba abafakizicelo abangenakulungeleleneyo kwizikolo zeekholeji bangafaka isicelo kwiNyuvesi yeYunivesithi. Le nkqubo inceda abafundi ukuba bathuthuke izakhono ezisisiseko baze bavumelane neyunivesithi. Qaphela ukuba bonke abafake izicelo kwiKholeji yeYunivesithi mabaye kwiseshoni yolwazi kwaye bahlele udliwano - ndlebe .
I-Chicago State ine- admissions ephelele , ngoko ke izigqibo zisekelwe ngaphezu kwedatha yenombolo. AmaBakala kunye namanqaku ovavanyo olulinganisiweyo ngokuqinisekileyo amacandelo ebalulekileyo ekulinganisweni kokulingana, kodwa amanyathelo angabalwa ngamanani ayabalulekile. Xa usebenzisa i-CSU yesicelo okanye isicelo esiqhelekileyo , amagosa avumelekileyo aya kufuna ukubona isicatshulwa esenziwe kakuhle (kufika kumazwi angama-650), kunye nomcebisi okanye utitshala wencwadi yesiphakamiso . Isicelo sibuye sicele ngemisebenzi yangaphandle , kunye nokubandakanyeka okunenjongo kunye namava okhokelo kunokuqinisekisa isicelo sakho.
I-Chicago State ilindele ukuba abafaki zicelo bagqibe iiyunithi ezine zesiNgesi, iiyunithi ezintathu zezibalo, iiyunithi ezintathu zezifundo zentlalo, iiyunithi ezintathu zesayensi, kunye neendlela ezimbini zokukhetha. Njengamakholeji amaninzi, i-Chicago State iya kujonga ukuthatha izifundo eziphakamileyo zezikolo eziphakamileyo . Ukuphunyezwa ngempumelelo kwe-AP, IB, i-Honors, kunye nezifundo eziBini zokuBhalisa bonke uncedo lubonisa ukulungelelaniswa kweekholeji.
Ukuze ufunde kabanzi malunga neYunivesithi yase-Chicago, ii-GPA zezikolo eziphakamileyo, izikolo ze-SAT kunye nama-ACT, amanqaku angancedisa:
IProfayili yase-Chicago State Admissions
Amanqaku afana ne-Chicago State University:
INkomfa yeNtlabathi yeNtshona
I-SAT Score Ukuthelekiswa kweNkomfa yeNtlalontle yeNtshona
Amanqaku omsebenzi Ukuthelekiswa kweNkomfa yeNtlabathi yeNtshona
Ukuba Uthanda IYunivesithi YaseChicago State, Unokuthi Ungathanda Ezi Zikolo:
IYunivesithi yaseMpuma Illinois
IYunivesithi yaseDallas GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-VCU GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Tech High Takeoff Technique
Impendulo yokunciphisa i-Oxidation - Impendulo ye-Redox
I-White Lady Ye-Durand Eastman Park
I-Grad School Online Education Disadvantages and Benefits